Home Wararka Gudaha Baarlamaanka Soomaaliya oo qaadayo tallaabo la xiriirta kiiska Ikraan Tahliil Faarax
Kulankii maanta ee xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo qaaday arrin la xiriirta Kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo markale cirka isku shareereay, kadib wareysi cusub oo uu dhawaan bixiyey Fahad Yaasiin.
Arrintan oo aan qayb ka aheyn ajendaha kulanka maanta ayaa waxaa Golaha dhex-geeyey xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka hor-hadlay Baarlamaanka Soomaaliya.
Jeesow oo ka mid ah xildhibaanada beesha ay kasoo jeedo Ikraan ayaa codsaday in la magacabo guddi soo baara kiiskaasi, si ay cadaalad u hesho sarkaalad Ikraan Tahliil.
Xildhibaanka ayaa ka dhawaajiyey in kiiska Ikraan uu noqday mid la’isku tuur-tuuray, sidaas daraadeedna loo baahan yahay in lasmeeyo baaritaan madax-bannaan.
Sidoo kale guddoomiyaha ayaa shaaca ka qaaday in Baarlamaanka uu si gaar ah uga hadli doono kiiskan, si ay cadaalad u helaan qoyska Ikraan Tahliil Faarax.
Ikraan Tahliil oo maqan muddo sanad ah ayaa waxaa horey ay NISA u shaaciyey inay u gacan gashay Al-Shabaab, kadibna ay dishay, balse waxaa ay wax weliba is-bedeleen markii uu arintaasi ka hadlay taliyihii NISA, Fahad Yaasiin oo jiho kale u leexiiyey kiiska.
Fahad Yaasiin ayaa wareysigiisa oo uu uga hadlay arrimo dhowr ah ku eedeeyey in dilka Ikraan ay ku lug lahaayeen Rooble, Al-Cadaalada iyo Mahad Salaad oo loo dhiibay NISA.
Si kastaba, lama oga sida ay wax noqon doonaan, balse arrintan ayaa dhalisay hadal heyn xoogan iyo shaki weyn oo ku aadan hadalka kasoo baxay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir
Previous articleMuxuu Madaxweyne Xasan ka sheegay kulankii xildhibaannada labada Aqal?
Next articleDaawo:- Muqaal Kudhawaad 4,000 kun oo Arday ayaa fasalada 8aad imtixaanadka Beledweyne ee Degaanada Hir-shabelle u fariistay Maanta, isniin ah.